स्याङ्जाकी ज्योति गुरुङ डेढदसकदेखि बेलायतमा छिन् । सानैदेखि गीतसंगीत र लेखनप्रतिको मोहले उनलाई सात समुद्रपारि समेत कुत्कुत्याई रहन्छ । मनमा उर्लेका भावलाई उनी शब्दमा उतार्न रुचाउछिन् । चाहे ती कथा आफ्नै हुन् वा समाजका । ‘यो कस्तो माया’, ‘मुटुको टुक्रा’ र ‘परदेशी छोरी’ उनकै शब्दमा बाहिर आएका श्रव्यदृष्य हुन् । समाजका फरक–फरक पक्षलाई उजागार गरिएको गीतलाई मेलिना राई, देवी घर्तीमगर र सुनिता दुलालले स्वरबद्ध गरेका छन् । प्रवासमा बसोबासरत् महिलाहरुको कथाव्यथा समेटिएको यिनको पछिल्लो तीज कोसेली ‘परदेशी छोरी’ ले ‘छायाँछवि तीज म्युजिक भिडियो अवार्ड २०७८’ मा उत्कृष्ट शब्दतर्फ पुरस्कार जितेको छ । मेरोलाइफस्टाइलकर्मी सुमित्रा लुइंटेलले उनीसँग गरेको कुराकानी :
परदेशमा बसेर तीज गीत सिर्जना गर्ने सोच कसरी आयो ?
मेरो पारिवारिक वातावरण नै एकदमै संगीतमय थियो । म स्याङ्जामा जन्मिए, गीतसंगीतप्रतिको रुचि मेरो सानै देखिको हो । म आफै पनि गजल, कबिता, साहित्य कोर्ने गर्थे तर त्यो सबै कागजको पानामा मात्र सीमित हुन्थ्यो । मेरो सृजनालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचले गर्दा नै यस क्षेत्र तर्फ तानिएकी हुँ ।
आफूले कोरेका शब्दले उत्कृष्ट अवार्ड जित्दा कस्तो लाग्यो ?
एकदमै खुसी लाग्दोरहेछ । यो मेरो जीवनकै पहिलो अनुभव हो । यो अनुभव दर्शकश्रोता सामु साट्न पाउदा एकदमै खुसी छु । मेरो मनका भावना गीतसंगीत मार्फत उजागार गर्न पाउँदा र त्यसलाई सबैले रुचाएर अवार्ड नै हात पार्दा एकदमै उर्जा मिलिरहेको छ । जिम्मेवारी थपिएको महसुुस गरेकी छु ।
बेलायतमा तीजको कस्तो क्रेज छ ?
कोरोनाका कारणले पोहोरपरार जस्तो रमझमको माहौल त थिएन । तर राम्रै भयो ।
यो गीतबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
‘परदेशी छोरी’ म आफैलाई परेको घटना हो । म लगायत नेपाल बहिर बसोबास सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको पीडालाई व्यक्त गर्नाका लागि यो गीत लेखेको थिए । गीतसंगीतलाई माया गर्नुहुने दिदीबहिनीहरूले मन पराई दिनु भएको छ । राम्रै प्रतिक्रिया पाएकी छु ।
अब आउने दिनमा के–कस्ता रचना गर्ने सोच छ ?
यस्तै आधुनिक लोकभाकाका गीतहरू हुनेछन् । अब केही दिनमा आधुनिक गीत पनि बजारमा ल्याउँदै छु ।
गुड नाइट– ‘राम्रो सपना बिर्सिंदा तनाव हुन्छ’
नेपाली गीत–संगीत क्षेत्रकी चर्चित मोडल हुन्– करिश्मा ढकाल । एक हजारभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी ढकालसँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको गुड
गायक राम रखाल मगर र गायिका सुनिता दुलालको ‘मायाको झझल्को’ सार्वजनिक भएको छ । रखालको जन्मिदनका अवसरमा मंगलबार सुवास टिभी
केकी भन्छिन्– ‘श्री ५ अम्बरेको सुटिङ सकेर परीक्षा दिन गएको कहिल्यै भुल्दिनँ’
काठमाडौँको जोरपाटीस्थित बाल सिर्जनालय माध्यमिक विद्यालयबाट सन् २०६४ सालमा एसएलसी दिएँ । त्यो हाम्रै स्कुल हो, बुबा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो ।